MOMBAN'NY FIKAMBANANAY - Transparency International - Initiative Madagascar
Mari-pandrefesana momba ny kolikoly
Isan-taona ny Transparency International dia mamoaka ny Maripandrefesana momba ny kolikoly izay mandahatra ireo firenena tsy dia misy kolikoly hatramin’ireo tena hanjakàn’ny kolikoly.
Toy ny ahoana no fomba hahazoana io Maripandrefesana io ?
Ny Maripandrefesana momba ny kolikoly dia manangona ireo antontam-baovao avy amin’ny loharano maro samihafa izay mampahafantatra ny fomba fahitàn’ireo eo anivon’ny sehatry ny fandraraharana na ireo manampahaizana ny kolikoly eo anivon’ny sehatra ara-panjakana.
Ireo loharanom-baovao dia tsy maintsy manaraka ireto fepetra manaraka ireto mba ho tena loharanom-baovao maripototra entina hametrahana ilay Maripandrefesana momba ny kolikoly :
Mandrefy ny fahitàna ny kolikoly eo anivon’ny sehatra ara-panjakana
Mifototra amina fomba fiasa matotra sy manan-kery, ary mandahatra sy manome naoty ireo firenena maro amina ambaratonga mitovy
Avy amina fikambanana azo antoka no sady manefa izany ara-potoana
Mametraka sokajy maro karazana amin’ny naoty mba hitsinjaràna tsara ny firenena tsirairay
Ny Maripandrefesana momba ny kolikoly ny taona 2015 dia azo taorian’ny nampiasàna loharanom_baovao miisa 12 avy amina fikambanana miisa 11 izay miandraikitra ny firaketana ireo fahitàna ny kolikoly mandritry ny herintaona. Mba hahafahan’ny firenena iray miseho ao anatin’ny Maripandrefesana momba ny kolikoly dia farafahakeliny loharanombaovao telo no nanombatombana azy.
Toy ny ahoana ny mahakasika an’i Madagasikara ?
Tamin’ny taona 2015 dia tany amin’ny laharana faha 123 amin’ny firenena miisa 168 no nisy an’i Madagasikara miaraka amin’ny isa 28 amin’ny 100.
I Madagasikara dia mitovy toerana amin’i Gambia, Goatemala, Kazakstan, Kirgistan ary Timor.
Efa ho telo taona mifanesy izao (2013-2014-2015) dia tsy niova ny isa azon’i Madagasikara :28. Tamin’ny taona 2012 dia mbola ambony noho izany izy io : 32 amin’ny 100.
Nandritry ny famoahana ny Maripandrefesana momba ny kolikoly ny 27 janoary 2016, dia voalaza fa tena ratsy io naoty io. Maro ny ezaka efa natao mba hanatsaràna ny fangaraharana eny anivon’ny sehatra ara-panjakàna , sy hahazana antoka fa mahaleo tena tokoa ireo izay misahana ny ady amin’ny kolikoly (BIANCO) ary koa ny hahazoana toky fa tena mahaleo tena ny fitsaràna mba hiadiana amin’ireo tsimatimanota.
Ny fandaharana ireo firenena ny taona 2012 hatramin’ny taona 2015 http://www.transparency.org/cpi2015#results-table
Ny sarintanin’ny Maripandrefesana ny momban’ny kolikoly 2015 (amin’ny fiteny anglisy) http://www.transparency.org/cpi2015#map-container
Ny fandraisana ny isa azon’ ny faritra Afrika atsimon’i Sahara ny taona2015 izay nataon’ny Talen’ny faritra Afrika atsimon’i Sahara eo anivon’ny Transparency International « Ny tany tan-dalàna no fanombohana ilay Afrika tadiavintsika » (amin’ny teny frantsay)http://blog.transparency.org/2016/01/27/afrique-subsaharienne-reussir-lafrique-que-nous-voulons-commence-par-letat-de-droit/
Raha manana fanontaniana mahakasika ny Maripandrefesana ny kolikoly ianao dia aza misalasala mifandray aminay amin’ny alalan’ny contact@transparency.mg.
Raha te handeha lavitra :
Ny fanadihadiana iraisampirenena notontosain’i Transparency International izy mameno ny maripandrefesana momban’ny kolikoly dia ireto avy :
Fandrefesana iraisam-pirenena ny kolikoly nataon'i Transparency International (teny anglisy): Cliquez ici
Tatitra iraisam-pirenena mahakasika ny kolikoly nataon'ny Transparency International (teny anglisy): Cliquez ici
Tombana ataon'ny Transparency International amin'ny rafitra nasionalin'ny Fahitsiana (teny anglisy): Cliquez ici
Fangaraharan'ireo tatitra ataon'ireo orinasa ataon'ny Transparency International ny taona 2014 (teny Anglisy): Cliquez ici
Transparency International dia hetsika era-tany velomin’ny fomba fijery : tontolo iray misy Fanjakana, orinasa, fiarahamonim-pirenena ary olom-pirenena tsy ahitana kolikoly na endrika kolikoly eo amin’ny fiainany andavan’andro.
Ny rantsana miisa 100 manerantany sy ny « secrétariat international » ao Berlin no miaraka miady ami’ny kolikoly mba hahatonga io fomba fijery io ho tanteraka.
Naorin’ny teratany allamand Peter Eigen, talen’ny Banky Iraisam-pirenena teo aloha, tamin’ny 1993, ary nanomboka tamin’ny 2014 no notantanan’i José Ugaz (péruvien) ny Transparency International.
Nohapariahana tanteraka ny fomba fiasan’ny fikambanana. Mahaleo tena hatrany ny rantsana tsirairay amin’ny asa atao, fa ny secretariat international no manentana sy mandrindra ary mamolavola ny fitaovana iraisana. Samy mifidy ny drafitra iasany, ny tanjona kendreny ary ny hampiasainy ny vola eo am-pelatanany izy ireo, mizaka tena ara-bola anatina paikady iarahana manapaka madritra ny fivoriambe isan-taona.
Transparency International – Initiative Madagascar (TI-IM) dia Fikambanana ara-dalàna Malagasy, naorina olom-pirenena vonona hiady amin’ny kolikoly tamin’ny taona 2000. Izy no rantsana nasionaly amin’ny ONG Transparency International eto Madagasikara.
Ny fandraisana anjara amin’ny ady atao ami’ny kolikoly amin’ny alalan’ny fampiroboroboana ireo fitsipika tokony arahina sy mendrika ary mangarahara amin’ny olom-pirenena eo amin’ny fiarahamonina malagasy no tanjona kendren’ny TI-IM.
Ahoana no fomba fiasan’ny TI-IM ?
Toy ny fikambanana rehetra, ahitana fivoriambe iray, filan-kevitra mpitantan-draharaha iray, ary birao mpanatanteraka iray misy mpiasa 6 amin’izao fotoana izao.
Toy ny rantsana TI rehetra, mahaleo tena ny TI-IM amin’ny fifidianana ny asa ataony. Mahaleo tena ara-bola tanteraka ny TI-IM
Amin’ny alàlana tetikasa iarahana amin’ny mpamatsy vola no ahazoan’ny TI-IM mampande ara-bola ny rafitra misy ao aminy.
Taorian’ny fifidiana ho filoham-pirenena ny febroary 1997, nisy olom-pirenana 4, 2 vavy 2 lahy, vavolombelona tamin’ny kolikoly teo amin’ny tontolon’ny asany, nanapa-kevitra izy ireo fa hiombona ezaka handrindra fanentanana ho an’ny vahoaka mba hanohitra io loza izay mihamitombo hatrany hatrany io. Nandritra ny fihaonana an-tampony nataon’ny IACC (Internationa Anti-Corruption Conference), tamin’ny 7 hatramin’ny 11 septambra 1997 tao Lima (Pérou), nihaona tamin’ny tompon’andraikitry ny hetsika Transparency International (foibe ao Berlin/Allemagne) ny iray tamin’izy ireo.
Noraiketina tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny taona 2000 ny Transparency International – Initiative Madagascar raha toa ka mbola tsy ara-dalàna izy talohan’izay. Ny taona 2002 no voamarika ho rantsana nasionalin’ny Transparency International ny fikambanana.
Nanohana ny fikambanana sy ny asany tamin’izany ny USAID (agence de cooperation amércaine) sy ny FES (Fondation Friedrich Ebert Stiftung). Anisan’ny tetikasa voalohany nahafantarana ny rantsana TI Malagasy ny fanadihadihana momba ny fahitan’ny vahoaka ny fiasan’ireo mpitsara vaovao manerana ny faritra enina eto amin’ny Nosy. Ireo Mpitsara azo lazaina fa mahitsy fijery no nasaina avy eo hanentana ny mpianatra ho mpitsara ao amin’ny ENMG (Ecole Nationale de Magistrature et des Greffes) mba hizara traikefa sy izay natrehany nandritra ny taona voalohany manoloana ny kolikoly. Ny taona manaraka, fanadihadihana hafa teo ami’reo olom-pirenena indray no natao mba ahafantarana oe ahoana ny fomban’ireo Mpitsara sy Mpiasan’ny Fitsarana ireo. Natsangana isan-taona arak’izay ny fitaovana iray hanamarihana ny tahan’ny fahitsin’izy ireo manoloana ny andraikiny, ary nahafahana manentana ny mpianatra manaraka.
Ny taona 2000 hatramin’ny 2009, naka mpiara-miasa maro hafa ny TI-IM ka nanao fanadihadihana eo amin’ny sehatra tsy miakina sy miankina, indrindra ny fahitan’ny isan-tokatrano ny kolikoly. Tetikasa lehibe maro no tanteraka nandritra io fotoana io, ny iray lehibe nisy 3 taona (2007-2010) mikasika ny kolikoly eo amin’ny sehatry ny fanabeazana fototra.
Nandritra ny krizy ara-politika tamin’ny taona 2009 hatramin’ny 2013, mbola nisy hatrany ny TI-IM, ary nitsangana ny CAJAC (Centre d’Assistance Juridique et d’Action Citoyenne) ny taona 2010 hatramin’ny 2014.
Ny taona 2015, nitsangana ny ekipa vaovao mpanatanteraka ny asan’ny fikambanana amin’izao fotoana izao, izay miompana amin’ireo tetikasa miady ami’iny kolikoly amin’ny lafiny fananan-tany, harena voajanahary, sehatra tsy miankina ary koa ny fampahalalana ara-panjakana. Manana tarigetra manerana ny Nosy ny fikambanana fa ny faritra Analamanga, DIANA, Atsimo Andrefana ary Boeny no tena imasoany aloha.
Ahitana ireto manaraka ireto ny filankevim-pitantanan-draharahan’ny TI-IM :
Filoha : Me Alex RAFAMANTANANTSOA, fitantanana fanindroany (registre d'intérét)
Mpitam-bola : M. Solofo RAKOTOSEHENO, fitantanana fanindroany (registre d'intérét)
Conseillers: M. Herizo RABARY, fandraisana voalohany ny toerana (registre d'intérêt)
M. Sata Johary RAMAMONJISOA,fandraisana voalohany ny toerana (registre d'intérêt)
Mpikambana mpanorina (Déontologue): Mme Yveline RAKOTONDRAMBOA (registre d'intérêt)
FOMBA FAMORONANA ORINASA